मेस्सी रोनाल्डोमा विशिष्ट खेलाडीको मुद्धाको अन्त्य !! पेलेको तथ्यांकमा को उत्कृस्ट !! - Experience Best News from Nepal
प्रकाशित मिति : बिहि, कार्तिक २८, २०७६
विश्व फुटबलमा सर्वाधिक ठुलो इतिहास बोकेका ब्राजिलियन पेलेले समेत रोनाल्डो मेस्सीको विबादमा प्रकाश पारेका छन् । उनले विश्व फुटबलमा मेस्सी एक पूर्ण खेलाडी रहेको ब्यक्त गरेका छन् । उनले रोनाल्डो र मेस्सीको उचाईमा नेय्मार नरहेको समेत बताएका थिए ।
रोनाल्डो मेस्सीको विबाद र मुद्धा प्रति ३ पटक विश्व कप विजेता बनिसकेका पेलेले विवाद प्रति बोल्दा विश्व फुटबल विधहरुले मुद्धाको अन्त्य भएको संज्ञा दिएका छन् । खेल र खेल शैलीको पूर्ण मध्यनजर गर्दै रोनाल्डो मेस्सी र नेय्मारको तथ्यांक पेलेले पेश गरेका हुन् । हर तबरमा बार्सिलोना स्टार लिओनेल मेस्सी विशिष्ट रहेको पुष्टि समेत गरेका छन् ।
पेलेले मेस्सी उत्कृस्ट छन् हर खेलमा, उनको बल पास गोल सहायता साथै गोल र खेल शैली विशिष्टता रहेको बताएका थिए । ७९ बर्षका पेले भन्छन यदी हाल आफु र मेस्सी एक टिममा खेलेको भए कुनै प्रतिद्वन्दीले हराउन नसक्ने बताएका थिए ।
पेलेले उक्त कुराहरु ग्याजेट्ट स्पोर्ट्सलाई बताएका थिए ।